Dabere na nyocha mbụ, LG Ultrafine 5K ndị nlele anaghị eweta nsogbu na rawụta | Esi m mac
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Apple ga-echegharịrị nkwekọrịta ya na LG mgbe niile, n'ihe gbasara nkwekọrịta ahụ e mere dị ka onye na-azụ ndị nlekota nke mpụga. Ka anyị cheta na e gosipụtara ndị nlere a n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2016, ka ewepụtara ha izu ole na ole. Mana usoro azụmahịa wee egbu oge rue Disemba. Anyị na-agbachitere mgbe niile na ọ ka mma ịnwe otu egwuregwu zuru oke na enweghị mmejọ karịa ịnye otu egwuregwu ogologo oge tupu oge eruo nke nwere ike ibute nsogbu n'ụdị ọ bụla, dịka n'ikpeazụ mere. N'ikpeazụ, a malitere ire nkeji izizi na njedebe nke 2016, yana nnukwu ego.
Mana n’oge na-adịghị anya ụfọdụ ndị ọrụ bidoro ịkọ akụkọ nsogbu na LG Ultrafina 5K nlereanya. O doro anya na mgbe nyochaa dị nso na router, e nwere ụdị nsogbu dị iche iche: disconnections nke ileba anya ejikọrọ na Mac, nkwụsị dị iche iche, n'etiti nsogbu ndị ọzọ. N’oge na-adịghị anya, onye nrụpụta Korea matara nsogbu ahụ wee wepụ ndị nlele ahụ nwere nkwarụ n’ụlọ ahịa.
Kemgbe ahụ ọ rụọla ọrụ idozi nsogbu ahụ, ụbọchị a tụrụ anya iji regharịa ngwa ọrụ a bụ mbido. N'ikpeazụ, ụbọchị a agbanweela ruo Machị 15 ụbọchị nke ha ga-ere ahịa ọzọ.
A na-anwale ụdị ọrụ ọhụụ ọhụrụ a site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi pụrụ iche dị iche iche. Nnwale mbụ ahụ, na-enye ohere iji nyochaa na nsogbu ndị a enweelarị nsogbu, ebe itinye ihe nlele dị n'azụ rawụta anaghị eweta ụdị nsogbu ọ bụla jikọrọ site na ọdụ ụgbọ mmiri Thunderbold 3.
Maka nke a, ha tinyere ya Rawụta kacha osisi ike, na nbudata nke ọtụtụ faịlụ, nke ga-amanye nwalee na ọta nke ileba anya. Na mbụ, ihuenyo ahụ ga-amụgharị na ụdị ule ndị a. Mana n'okwu a omume ya ziri ezi. N'ikpeazụ, na ụdị ndị gara aga, njehie mere mgbe ejikọtara akụkụ dị na ọdụ USB-C. N'okwu a, omume gị ziri ezi.
Ya mere, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na edoziwo nsogbu ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụta ileba anya a ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa apụl na ego € 1.049.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Dika ule mbu, LG Ultrafine 5K monitors adighi enye nsogbu na router